July 7, 2020 1254
कलाकारहरु आफ्नो पारिवारिक सुख, दुःख बाँड्न त’यार हुन्छन् तर उमेर ? सबैले लुकाउँछन् । आफ्नो करिअरमा असर पर्ने डरले पनि उमेरका विषयमा कमै कला’कारहरु मात्रै खुल्छन् ।
विशेषगरी चल’नचल्तीमा रहेका अभिनेता/अभिनेत्रीहरु त यो विषयमा प्रवेश नै गर्न रुचाउँदैनन् ।भनिहाले पनि घ’टाएर बताउँछन् । उनीहरूकाे वास्तविक उमेर कति हुन्छ, कमैलाई मात्रै थाहा हुन्छ । तपाईँलाई थाहा छ, राजेश हमाल, भुवन केसी, अनमोल केसी’को उमेर कति छ ?
को–कति वर्ष पुगे जानौँ । महाना’यक राजेश हमाल बुवा चुडा बहादुर हमाल र आमा रेणु केसी हमालको कोखबाट २०२१ साल जेठ २६ गते पाल्पाको तानसे’नमा एक सामान्य परि’वारमा जन्मिएका हुन् ।
उनि अहिले ५६ बर्षका भए । उनका बुवा विभिन्न देशका लागि नेपालको तर्फबाट राजदुत थिए । उनले चलचित्र युगदेखि युगसम्मबाट नेपाली चलचित्रमा क्षेत्रमा डेब्यु गरेका हुन् ।
झन्डै २०० भन्दा बढी चलचित्रहरुमा अभिनय गरिसकेका हमाल ३ करोड नेपाली दर्श’कको मन मस्तिस्कमा बसि’सकेका छन् । छिल्लो केहि समयदेखि भने हमाल पर्दामा देखि&एका छैनन् । उनले ३ दशक नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा बिताए ।
उनले बोलेका केहि डायलगहरु अझै पनि दर्शक’हरुले भुलेका छैनन् । उनले पछिल्लो समय चल’चित्र नखेले तापनि उनका फ्यान फलोअर्स भने घटेका छैनन् । अहिले पछिल्लो समय विवादमा आउने कलाकारहरुको जमात भने उग्र’रुपमा देख्न सकिन्छ । तर हमाल विवा’दमुक्त कलाकार हुन् । भिडियो हेर्नुहोस्…
Prevसुशान्तको अन्तिम फिल्मको ट्रेलरले बनायो विश्व रेकर्ड, एकदिन नबित्दै यति धेरैले हेरे (भिडियोसहित)
Nextसरिता गिरी पार्टीबाट निष्कासित, सांसद पद पनि हिड्यो…
जसपा र कांग्रेस मिल्दा समेत केपी शर्मा ओली’लाई हटाउन सकिँदैन: राजेन्द्र महतो